जापानमा १२ सर्वश्रेष्ठ हिमस्थानहरू: शिराकावागो, जिगोकोदानी, निसेको, सप्पोरो हिउँ चाड ... Best of Japan
हिउँ पर्खाल, तातेयामा कुरोबे अल्पाइन मार्ग, जापान - शटरस्टक
यस पृष्ठमा, म जापानको अद्भुत हिउँ दृश्यको बारेमा परिचय दिन चाहन्छु। जापानमा धेरै हिउँका क्षेत्रहरू छन्, त्यसैले उत्तम हिम स्थानहरू निर्णय गर्न गाह्रो छ। यस पृष्ठमा मैले उत्तम क्षेत्रहरू छोटकरीमा लेखें जुन मुख्यतया विदेशी पर्यटकहरू माझ लोकप्रिय छन्। म यसलाई तीन भागमा बाँडफाँड गर्नेछु। (१) भारी हिउँ पर्ने क्षेत्रहरू जस्तै शिराकागोगो र जिगोकोडन, (२) स्की रिसोर्ट्स जस्तै निसेको र हकुबा, ()) प्रतिनिधि हिउँद उत्सवहरू जस्तै सप्पोरो हिउँ उत्सव र योकोटे हिउँ समारोह। यदि तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने, कृपया एक चोटि हेर्नुहोस्।
म तपाईंसँग जापानको हिउँ परेको गाउँको दृश्य साझेदारी गर्न चाहन्छु। यी शिराकावा गो, गोकायामा, मियामा र ओचि-जुकुका तस्वीरहरू हुन्। कुनै दिन, तपाईं यी गाउँहरूमा शुद्ध संसारको आनन्द लिनुहुनेछ! सामग्रीको तालिका हिउँले ढाकेका गाउँहरूका फोटाहरू हिउँ पर्ने गाउँहरूमा जाँदा के लगाउने? हिउँले ढाकेका गाउँहरू शिराकावागोका फोटाहरू ...
भारी हिउँ क्षेत्रमा सर्वश्रेष्ठ स्थल भ्रमण स्थान
जापानमा सर्वश्रेष्ठ स्की रिसोर्ट्स
जापानमा सर्वश्रेष्ठ शीतकालीन उत्सवहरू
सर्वश्रेष्ठ दर्शनीय स्थल जहाँ ड्रिफ्ट आइस हेर्न सकिन्छ
शिराकावागो, गोकायामा (केन्द्रीय होन्शु)
यदि तपाईं जापानको खास गरी हिउँ परेको क्षेत्रमा जान चाहानुहुन्छ भने तपाईं जापानको सागर वा पहाडी क्षेत्रमा जान सक्नुहुन्छ। डिसेम्बर देखि मार्च सम्म, ओसिलो हावा जापानको सागरबाट जापानी टापुमा बग्दछ। जापानी द्वीपसमूहको मध्यभागमा हिमाली क्षेत्र भएको हुनाले हिउँका बादलहरू जन्मेको यस हिमाली क्षेत्रलाई नम हावाले छोपेको छ। यस तरीकाले जापान सागर छेउ र पहाडी क्षेत्र धेरै हिउँ परिरहेको छ।
शिराकावागो र गोकायामा, जुन मैले यहाँ परिचय गर्दछु, जापान सागर साइडको पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित छन्। यी गाउँहरूमा हरेक वर्ष धेरै हिउँ वर्षा हुन्छ। त्यहाँ धेरै हिउँ भएको अन्य क्षेत्रहरू छन्, तर यी दुई गाउँहरूमा अझै पनि भारी हिउँ पर्ने क्षेत्रमा परम्परागत घरहरू छन्। ती घरहरू हिउँदे दृश्यहरू सुन्दर छन्।
Shirakawago Gokayama संग तुलना गर्दा, Shirakawago Gokayama भन्दा ठूलो छ। शिराकावा-गो पर्यटन गन्तव्यको रूपमा राम्रोसँग विकसित गरिएको छ, र त्यहाँ धेरै बस टुरहरू छन्। अर्कोतर्फ, Gokayama को देहली गाउँको वातावरण को एक धेरै छ।
हिउँको बारेमा, Gokayama हिउँ भारी छ। त्यसोभए, गोकायामा घरहरूको छत शिराकावा-भन्दा तीखो छ कि यसले हिउँ खसाल्न सक्छ।
यदि तपाईं तलका भिडियोहरू हेर्नुभयो भने, तपाईं यी गाउँहरूको बारेमा थोरै बुझ्नुहुनेछ। टोकियोबाट ट्रेन र बसमा यी गाउँहरूसम्म पुग्न6घण्टा लाग्छ। यी गाउँहरूमा, राती पनि प्रकाश पार्दछ। किनकि यी गाउँहरूमा आवास सुविधाहरू छन्, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं त्यहाँ बस्नुहोस् र धेरै हिउँदे दृश्यहरूको मजा लिनुहोस्।
शिराकावागो (Gifu प्रान्त)
शिरकावागो, होन्शु टापुको पर्वतीय क्षेत्रमा अवस्थित परम्परागत गाउँ, जाडोमा हिउँको सुन्दर दृश्य प्रस्तुत गर्दछ। जनवरीको अन्तदेखि फेब्रुअरीको शुरुमा, यस पृष्ठको पहिलो फोटोमा जस्तै, गाउँ सुन्दर ढंगले प्रकाशित गरिनेछ। जापानमा, सुन्दर हिमपातहरू होक्काइडो र हिमाली क्षेत्रहरूमा देख्न सकिन्छ ...
>> Shirakawago को आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
>> Gokayama को आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
जिगोकोदानी याएन-कोएन (केन्द्रीय होन्शु, नागानो प्रान्त)
जिगोोकुदानीमा तातो स्प्रि enjoyहरूबाट आनन्द लिइरहेका बाँदरहरू। नागानो प्रान्त
"जिगोकोदानी" को अर्थ हुन्छ "भ्याली उपत्यका" जब अंग्रेजीमा अनुवाद गरियो। जापानमा हामी प्राय: त्यस स्थानको नाम लिन्छौं जहाँ ठूलो प्राकृतिक तातो वसन्त "नरक" छ। यद्यपि यो "Jigokudani Yaen-koen" बन्दरहरुको लागि स्वर्ग हो, नरक होइन। बाँदरहरूले प्राकृतिक तातो स्प्रि withहरूसँग आफ्नो शरीरलाई तताउन सक्छ।
Jigokudani Yaen-koen शिगा कोगेनको नजिक छ, जापानको सर्वश्रेष्ठ स्की रिसोर्ट्स मध्ये एक। तुलनात्मक रूपमा जापानको समुद्रको नजिक, area850० मिटर उचाई भएको यो क्षेत्र भयानक भारी हिउँ परेको क्षेत्र हो। बन्दरहरू चिसो जाडोमा बाँच्न सक्दछन, तातो स्प्रि .मा भिजाएर।
बाँदरहरूले तातो स्प्रि loveहरू मन पराउँछन् र तातो स्प्रि .हरू पनि प्रवेश गर्छन् यदि यो चिसो छैन भने पनि। Jigokudani Yaen-koen हिउँ बिना मौसममा पनि खुला छ।
>> जिगोकोदानीको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
जिन्जान ओन्सेन, प्रसिद्ध हिट स्प्रिंग्स ओल्ड टाउनको हिउँ, ओबनाजावा, यामागाता, जापान = शटरस्टकमा रातको दृश्य
जिन्जान ओन्सेन: जापानी प्रसिद्ध चिसो वसन्त शहर जाडो, यामागाता, जापान = शटरस्टक
के तपाईंलाई जापानी टिभी नाटक "Oshin" (1983-1984) थाहा छ? "
ओशिन "ओशिनकी एउटी केटीको कथा हो जुन १०० वर्ष भन्दा बढी जापानको भारी हिउँ पर्ने क्षेत्रमा जन्मेकी थिई। यो कथा एसियाका धेरै देशहरूमा हिट भयो। यस नाटकको मञ्च जिन्जान ओन्सेन थियो।
जिन्जान ओन्सेन by० मिनेटको बसबाट ओशिदा स्टेशनबाट जेआर यामागाता शिन्कन्सेनमा छ। स्पष्ट रूपमा, यो धेरै असुविधाजनक ठाउँ हो। यसको सट्टा, यो पनि दुर्लभ स्थान हो जहाँ पुरानो जापान रहन्छ। माथिको फोटोमा स्पा शहरमा, त्यहाँ १०० वर्ष पहिले काठको भवनहरू छन्। यस्तो देखिन्छ कि त्यस समयमा यो स्पा रिसोर्टको रूपमा सम्पन्न थियो। तपाईं ती पुराना ईन्बाट देख्नुहुने हिउँ दृश्यहरू उत्तम छ।
यदि तपाईं जापानमा डिसेम्बर देखि मार्च सम्म आउन सक्नुहुन्न भने पनि हिम दृश्य हेर्ने मौका अझै छ। केन्द्रीय होन्शुको हिमाली क्षेत्र हुँदै गएको पर्यटक सडक "तातेयमा कुरोबे अल्पाइन मार्ग" मा, "हिउँ पर्खाल" माथी हेर्न सक्नुहुन्छ जुन माथिको भिडियो मा देखिएको छ जुन अप्रिल मध्य देखि जुन जुन मा मामी छ।
तातेयामा कुरोबे अल्पाइन रूट पहाडी क्षेत्र "उत्तर आल्प्स" को माध्यमबाट 3000००० मीटर वा अधिकको उचाईमा सडक हो, र कुल विस्तार करिब 37 20 किलोमिटर छ। यो रोड जाडोको समयमा बन्द हुन्छ। प्रत्येक वसन्त theतुमा हिउँको हिउँले सडकमा हिउँ हटाउँछ। लगभग २० मिटर उचाइको हिउँ पर्खाल वरिपरि बनिएको छ। तपाईं सडकको एक भागमा बसबाट तल झर्न सक्नुहुन्छ र हिउँ पर्खाल हेर्दा हिंड्न सक्नुहुन्छ। तातेयामा कुरोबे अल्पाइन मार्गका लागि, जापान सागर छेउमा तोयामा प्रान्तबाट प्रवेश गर्नुहोस् र नागानो प्रान्तको लागि अगाडि बढ्न सिफारिस गरिएको छ।
>> टाटेयामा कुरोबे अल्पाइन मार्गको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
यदि तपाईं स्कीइ,, स्नोबोर्डि and र स्लेडिding जस्ता गतिविधिहरूको आनन्द लिन चाहनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु स्की रिसोर्टमा जान। यो ठीक छ यदि तपाईंले यस्तो गतिविधि कहिल्यै अनुभव गर्नुभएको छैन भने पनि। एक सानो बच्चा संग पनि तपाईं सबै संग यसको मजा लिन सक्नुहुन्छ। स्की रिसोर्ट्सले लगाउने र स्कीइंग पनि लिन सक्छ, त्यसैले कृपया सबै तरिकाले प्रयास गर्नुहोस्!
जापानमा धेरै स्की रिसोर्टहरू छन्। यद्यपि तिनीहरू माझबाट सिफारिस गरिएका स्थानहरूलाई संकुचित गर्न धेरै गाह्रो छ, निम्न स्की रिसोर्टहरू विशेष गरी विदेशी पर्यटकहरूका लागि लोकप्रिय छन्, र त्यहाँ धेरै अंग्रेजी प्रदर्शनहरू पनि छन्। हिउँको गुणस्तर पनि राम्रो छ, त्यसैले यदि तपाईं यी स्की रिसोर्टहरू भ्रमण गर्नुहुन्छ भने, तपाईं पक्कै राम्रो मेमोरी बनाउन सक्षम हुनुहुनेछ।
पाउडर मार्फत पौंडी खेल्नुहोस्! , निसेको, जापान = शटरस्टक
Niseko जापान मा अग्रणी स्की रिसोर्ट हो। यो लगभग hours घण्टा3घण्टा minutes० मिनेट होक्काइडोको नयाँ Chitose एयरपोर्टबाट छ। निसेकोको हिउँको गुणवत्ता धेरै राम्रो छ, यो धेरै ठूलो र धेरै लोकप्रिय छ। विशेष गरी अष्ट्रेलिया जस्तो विदेशबाट स्कीयरहरूको भीड। यदि तपाईं जापानको सर्वश्रेष्ठ स्की रिसोर्टमा जान चाहानुहुन्छ भने, म या त यो निसेको वा नाकुबा नागानो प्रान्तमा सिफारिस गर्दछु। यदि तपाई सप्पोरोमा घुम्न जान चाहानुहुन्छ भने तपाई निसेको जानु पर्छ। यदि तपाईं जापानको सब भन्दा राम्रो हिमाली क्षेत्र हेर्न चाहानुहुन्छ भने तपाई अझ हाकुबा जानुहुन्छ। निसेकोको बारेमा अधिक जानकारीको लागि कृपया निम्न लेखहरू हेर्नुहोस्।
निसेकोसँगै, होक्काइडोमा रुसुत्सु स्की रिसोर्ट पनि लोकप्रियतामा बढ्दै छ = शटरस्टक
होसेकोडोमा निसेको बाहेक स्की रिसोर्टको रूपमा, म तपाईंलाई रुसुत्सु स्की रिसोर्टमा सिफारिस गर्दछु। रुसुत्सु स्की रिसोर्ट निसेकोको नजीक छ, र हिउँको गुणवत्ता नीसेको भन्दा निकट छैन। यो नयाँ Chitose एयरपोर्ट बाट करिब २ घण्टा अवस्थित छ, र यातायात Niseko भन्दा राम्रो छ। शुरुआतीहरूको लागि स्की रिसोर्टको रूपमा उपयुक्त, रुसुत्सु निसेको भन्दा अलि बढी उपयुक्त हुन सक्छ।
यद्यपि निसेको रुसुत्सु भन्दा ठूलो छ। निसेकोमा एउटा शहर छ, तपाईं विभिन्न रेस्टुरेन्टहरू र तातो स्प्रि enjoyहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ, तर रुसुट्समा तपाईं होटल रेष्टुरेन्टहरूमा बढी खानु हुनेछ। निसेको रुसुत्सु भन्दा बढी उचित हुन सक्छ।
जापानी माउन्ट रoो, फेस्टिवल, यामागाटा, जापानमा हिउँ राक्षसहरूको रूपमा पाउडर हिउँसँग सुन्दर फ्रिजन वन कभर गरिएको छ।
यदि तपाईं जापानको तोहोकु क्षेत्रमा स्की रिसोर्ट जान चाहनुहुन्छ भने, म जाओ स्की रिसोर्ट सिफारिस गर्दछु। जाओमा, तपाई "जुहियो" नजिक देख्न सक्नुहुन्छ जति माथी तपाईं फोटो र भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। जुहायो जाओमा जाडोको एक विशेष विशेषता हो। यो हावामा ओसको माध्यमबाट गठन हुन्छ जब अओमोरी फर रूखहरू स्थिर हुन्छ र तिनीहरूमा हिउँ जम्मा हुन्छ। यसलाई "आइस राक्षस" पनि भनिन्छ। यदि तपाईं जाओमा जानुहुन्छ भने, तपाईं धेरै जुहायोको साथ एक शानदार ढलान स्लाइड गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं पनि रोपवे भित्रबाट Juhyo मा हेर्न सक्नुहुन्छ।
सबैभन्दा धेरै लोकप्रिय जापानी स्की रिसोर्ट विदेशी पर्यटकहरूको बीचमा होक्काइडोको निसेको हो। यद्यपि होन्शुमा हाकुबाको लोकप्रियता पनि हालै बढेको छ। हाकुबा हिउँको गुणस्तर र आकार दुबैमा निसेको भन्दा अवर छैन। हाकुबा जापानको सबैभन्दा असभ्य पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित छ। त्यसोभए, हकुबाको स्लोपमा स्लाइड गर्दा, तपाईं पहाडको दृश्यको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ निसेको भन्दा बढी शक्तिशाली। हाकुबा प्रतियोगिताको लागि प्रयोग गरिएको थियो जब नागानो ओलम्पिक आयोजित भएको थियो। म हाकुबालाई पनि मनपराउँदछु, म अहिलेसम्म धेरै चोटि हाकुबा स्की रिसोर्टमा स्किइ गर्दै छु। आखिर कुनचाहिँ राम्रो छ निसेको वा हकुबा? यो धेरै गाह्रो प्रश्न हो। सम्भवतः धेरै मानिसहरूले "Niseko" भन्नेछन्। विशेष गरी अ communicate्ग्रेजी संचार गर्न सजिलो छ, त्यसैले Niseko पहिलो पटक सहजै खर्च गर्न सक्षम हुनेछ।
शिगा कोजेन स्की रिसोर्टमा, तपाईं धेरै स्की क्षेत्र = शटरस्टकको मजा लिन सक्नुहुन्छ
शिगा कोजेन स्की रिसोर्ट्समा करीव २० स्की रिसोर्टहरू हुन्छन्। संयुक्त क्षेत्र जापान मा सबै भन्दा ठूलो छ। हिम गुणवत्ता पनि धेरै राम्रो छ। सुविधाहरू अलग-अलग स्की रिसोर्टमा निर्भर हुन्छन् ताकि तपाईं आफ्नो मनपर्ने ढल फेला पार्न र आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। तातो स्प्रि .हरू पनि छन्।
यो शिगा कोगेन हो कि मैले पहिलो पटक स्काई गरें। मेरो जूनियर हाई स्कूलमा हरेक वर्ष, शिगा कोगेनमा स्की प्रशिक्षण शिविर आयोजित गरिएको थियो किनभने हिउँको गुणस्तर राम्रो छ। त्यस बारेमा, शिगा कोगेनको मूल्यांकन उच्च छ। यद्यपि धेरै केसहरूमा व्यक्तिगत स्की रिसोर्टहरू सार्नको लागि बस प्रयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ। म हाकोबालाई नागानो प्रान्तमा एकल स्की रिसोर्टको रूपमा सिफारिश गर्दछु।
जाडो मा जापान मा विभिन्न शहरहरु मा "हिउँ चाड" आयोजित छ। ती मध्ये, निम्न तीन हिउँ चाडहरू विशेष रूपमा लोकप्रिय छन्।
जापानको सप्पोरो, होक्काइडोमा फेब्रुअरीमा सप्पोरो हिउँ फेस्टिवल साइटमा हिउँ मूर्तिकला। फेस्टिवल साप्पोरो ओडोरी पार्कमा वार्षिक रूपमा आयोजित हुन्छ
जापानमा सबैभन्दा प्रख्यात हिउँ महोत्सव "सप्पोरो हिउँ महोत्सव" हो जुन हरेक वर्ष फेब्रुअरीको शुरुमा सप्पोरोमा आयोजना गरिन्छ। यस समयमा सप्पोरोको मुख्य सडकमा धेरै विशाल हिउँका मूर्तिहरू स्थापित भएका छन्। साँझमा, ती हिउँका मूर्तिहरू उज्यालो हुन्छन्। स्टालहरू अप लाइन, तिनीहरू धेरै रमाईलो छन् र एक उत्तम वातावरण सिर्जना।
अर्को ठाउँमा, बच्चाहरूले हिउँको रमाइलो लिन सक्छन्। सप्पोरोका लागि, कृपया तलका लेखलाई पनि सन्दर्भ गर्नुहोस्।
यस पृष्ठमा, म सिफारिश गरिएको टूरिस्ट स्पटहरू र के गर्ने जब तपाईं होक्काइडोको सप्पोरोमा यात्रा गर्नुहुन्छ। म बर्षमा सिफारिस गर्ने पर्यटक स्थलहरु बाहेक, म सिफारिस गरिएका स्पटहरु र वसन्त, ग्रीष्म, शरद winterतु र जाडोको प्रत्येक मौसममा के गर्ने भनेर बुझाउनेछु। तालिका ...
ओटारु हिउँ प्रकाश मार्ग
ओट्टारु प्रकाश मार्ग हिम उत्सव प्रकाशको साथ र मोमबत्तीहरू प्रकाश प्रतिबिंब ओटारु नहरमा = शटरस्टकमा
ओटारु एउटा पोर्ट शहर हो जुन लगभग 40० किलोमिटर उत्तरपश्चिमको पश्चिममा अवस्थित छ। यो जापानको समुद्री किनारमा पर्छ र हिउँद अक्सर हिउँदमा पर्छ। एक पटक व्यापार द्वारा फस्टाइए पछि, एक ठूलो नहर निर्माण गरियो। वर्तमानमा केही नहरहरू पुनःनिर्माण गरियो तर सुन्दर बन्दरगाह शहरको दृश्य अझै बाँकी छ। "ओटारु हिउँ प्रकाश मार्ग" यस नहरमा प्रत्येक फेब्रुअरी मध्यमा हुनेछ। नहरमा असंख्य मोमबत्तीहरू छन्, र धेरै मोमबत्तीहरू फोहोर रेखाको साइटमा पनि प्रज्वलित छन्। शुद्ध सेतो हिउँमा मैनबत्तीको साथ दृश्य आकर्षक र धेरै लोकप्रिय छ। ओटारु यसको स्वादिष्ट माछाको लागि परिचित छ। जाडोमा माछा मार्ने माछा विशेष गरी स्वादिष्ट हुन्छ। यदि तपाईं ओटारुमा जानुहुन्छ भने, कृपया सुशि सबै प्रकारले खान्नुहोस्!
>> ओटारु स्नो लाइट पथको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
योकोटे हिउँ महोत्सव
योकोटे चाडमा, तपाईलाई बरफको गुम्बजमा तातो खाना दिन सकिन्छ जसलाई कामकुरा भनिन्छ
तोहोकु क्षेत्रको जापान सागर छेउमा अवस्थित अकिता प्रान्त योकोटे एक सुन्दर शहर हो। योकोटे यसको उच्च हिउँको लागि परिचित छ। यहाँ, "योकोटे युकी महोत्सव" प्रत्येक वर्ष फेब्रुअरीको बीचमा आयोजना हुनेछ। यस चाडमा माथिको तस्वीर जस्तो "कामकुरा" (हिउँ डोम) धेरै नै बनाइएको छ। कामकुरा हिउँको क्षेत्रमा लामो समयको लागि निर्माण गरिएको हो।
कामकुरामा, स्थानीय बच्चाहरूले न्यानो खाना र पेय पदार्थ तयार गर्छन् र तिनीहरूलाई आउनेहरूलाई दिन्छन्। तपाईं कामकुरामा स्थानीय बच्चाहरूसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। कामकुराको गहिराइमा, भगवान उत्सव मनाउँदै हुनुहुन्छ। तपाई अझ थोरै पैसा दिनुहुन्छ।
जब म गइफु प्रान्तको पहाडमा बस्ने बालक थिएँ, जब भारी हिउँ पर्‍यो भने मैले मेरो चचेरो भाईसँग मिलेर कामकुरा बनाएको छु। कामकुराको भित्री भाग निकै न्यानो छ। मैले कामकुरामा तातो पेय पदार्थ पिए, चामलको केक पकाए र खाए। यो रमाइलो स्मृति हो। कृपया परम्परागत जापानी कामकुरा खेलको पनि आनन्द लिनुहोस्।
जापानको आबाशिरीमा ओखोटस्कको समुद्रीतर्फ बहाव आइस र पर्यटक क्रूज
जनवरीको अन्तदेखि प्रत्येक बर्ष मार्चको शुरूतिर, बग्ने बरफ होक्काइडोको उत्तरपूर्वी भागमा ओखोट्सकको समुद्रबाट बग्नेछ। बहाव बरफ बरफ हो जुन पानीको सतहमा बग्दछ। होक्काइडोमा बग्ने बग्दो बर्फ उत्तर समुद्रमा चिसो हावाले जमिनको छालहरूको साथ जन्माउँदछ। फेब्रुअरीमा होकाइडोको उत्तरपूर्वी भागमा अवस्थित अबाशिरी र मोन्बेत्सु समुद्री बहाव बरफले भरिन सक्छ। मैले अबाशिरी क्लिफबाट बग्ने बरफले भरिएको सागर देखेको छु। यो एकदम शान्त समुद्र थियो। त्यहाँ कुनै छालहरू थिएनन्। उत्तरी बतास यति जोडदार थियो कि शरीर स्थिर छ जस्तो देखिन्थ्यो।
यस्तो चट्टानको शीर्षबाट देख्नुको साथसाथै, बहाव बरफ पनि जहाजमा देख्न सकिन्छ। अबाशिरीमा, तपाईं "अरोरा" सवारी गर्न सक्नुहुन्छ। अरोड़ा जहाजको तौलले बरफ तोडेर अगाडि बढ्छ। मोन्बेत्सुमा तपाईं "Garinko" सवारी गर्न सक्नुहुन्छ। Garinko जहाजको टाउको मा सेट पेंच द्वारा बरफ तोड्न र अगाडि बढ्न। यदि तपाईं भाग्यमानी हुनुहुन्छ भने, तपाईं बग्ने बरफमा मोहराहरूको आमा बुबा र बच्चा पाउन सक्नुहुनेछ।
अरोरा र गेरिंकोको आधिकारिक साइटहरू निम्नानुसार छन्।
यद्यपि गारिन्कोको आधिकारिक वेबसाइट जापानी भाषामा मात्रै छ, तपाईं अंग्रेजी अ sentence्ग्रेजीको स्पष्टीकरण पढ्न "अंग्रेजीमा आरक्षण गर्न" क्लिक गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ।